Dhalinyaro Soomaali ah oo xirtay Khadkii Tareenka ee isku xira Jabuuti iyo Magaalada Addis-Ababa - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dhalinyaro Soomaali ah oo careysay ayaa xanibtay oo jartay Wadadda Tareenka ee isku xira dallaka Jabuuti iyo Itoobiya oo ah marin muhiim u ah Itoobiya oo ku tiirsan dekadaha dalka Jabuuti.
Sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters, Madaxweynaha Gobolka Soomaalida Ethiopia Mustafa Muhumed Omer ayaa maanta sheegay in la xanibay waddo muhiim ah iyo qad tareen ganacsi oo halbowle ah, oo isku xira magaalada Addis Ababa iyo dekedda magaalada Jabuuti.
Waddadan ayaa ah midda la mariyo inta badan badeecadaha la gaarsiiyo 110-ka milyan ee qof ee ku nool dalka Ethiopia, balse si madax-banaan looma xaqiijin arrintan.
Xafiiska ra’iisul wasaaraha Ethiopia iyo mas’uuliyiinta Jabuuti ayaan sidoo kale wax jawaab deg eg ah laga helin. Madaxweyne Mustafa Muhumed Omer ayaa sheegay in waddada iyo Khadka tareenka ay xanibeen koox dhallinyaro ah oo ka dibad-baxaya weerar dhacay Sabtidii.
Previous articleMusharixii ugu horeeyay ee Aqalka Sare oo la diiwaan geliyay iyo 2 Qodob oo lagu eedeeyay Axmed Madobe
Next articleHanti-dhowrka oo dhimay Lacagihii la siin jiray G/Banaadir iyo Hay’ado uu dalbaday in laga joojiyo… (Akhriso)